IINDIDI ZEEKHITSHI ZOKUBALA (IGALARI YEZITHOMBE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zeekhitshi zokubala (igalari yezithombe)
Iindidi zeekhitshi zokubala (igalari yezithombe)
Ngeentlobo ngeentlobo zeetafile zekhitshi kunokuba ngumceli mngeni wokufumana eyona ilungele ikhitshi lakho. Ikhawuntari yakho yasekhitshini yeyona ndawo yakho iphambili yomsebenzi kwaye inokuba yindawo ekugxilwe kuyo ekhitshini lakho. Apha ngezantsi kukho iindidi ezahlukeneyo zeetafile zekhitshi zokukunceda ukhethe ezona zinto unokukhetha kuzo kunye nezinto eziyilo loyilo lwakho lwasekhaya.
Imiphezulu yeetafile zeglasi
Yiyiphi i-Countertop efanelekileyo kwiKhitshi?
Yiyiphi i-Countertop ehlala ihleli?
Yiyiphi i-Countertop elula ukuyigcina?
Yeyiphi i-Countertop eXabiso lifikelelekayo?
Eyona ndawo ilungileyo yeKitchen Countertops Infographic:
I-Granite inokuza imhlophe, igolide, ingwevu, i-tan, isinyithi, emnyama, ebomvu, luhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka- nangokudityaniswa kwale mibala. Itafile yegranite ehloniphekileyo ine-soft, matte finish kunye nomphezulu ogudileyo kwaye kakhulu ukuba kukho into ebonakalayo elityeni. Njengokubala kwegranite, ikhawuntara yegranite ebunjiweyo yomelele kakhulu kwaye iyala ukuxwaya, ukuqhekeka kunye nokuqhekeka. I-granite ehloniphekileyo ayimelana nobushushu.
yimalini ukutshintsha ngokusemthethweni igama lakho
Imiphezulu yeetafile zekhitshi zeGranite ziyakwazi ukumelana nokukrwela (xa zitywinwe zaza zanyangwa), ukumelana nobushushu, ukunganyangeki kwebala kwaye zinika ukhuselo lwendalo ekungqineni nasekungubeni. IGranite ikwabonelela ngombala wendalo obanzi onokukhetha kuwo.
Kwelinye icala, ngelixa lihlala ixesha elide, i-granite ine-fragility yayo kwindlela yeekona. Iikona ezandisiweyo ngaphaya komda wekhabhathi zakho zisengozini yokutsalwa. Ukuba iichips zekona, kuyakufuneka uqeshe ingcali ukuze ilungise.
Imiphezulu yeetafile zeGranite ziya kufuna ukuthengiswa kwakhona amaxesha ngamaxesha ukugcina iipropathi zayo ezinganyangekiyo. Kungenxa yokuba inyengane ngokwendalo ingena ngaphakathi, okuthetha ukuba iya kukufunxa ukuchitheka ukuba ayitywinwanga, ayitywinwanga kakuhle, okanye ukuba itywina sele liphelile. Oku kufuneka kwenziwe qho ngonyaka, kodwa ukuba uchitha imali eyongezelelweyo inyangiwe inyangiwe, unganakho ukuya kangangeminyaka eli-10 ngaphandle kokuyithenga kwakhona. Ngelishwa, inyengane sele ikhethwe ngokufanelekileyo.
Lenyengane olukhazimlisiweyo -I-sheen ebengezelayo yetafile yegranite ecoliweyo yindawo ephezulu ekhangelekayo ekhitshini lakho. Ikwabonelela ngombono wokuhlala ohleli kakhulu.
I-gloss yemvelo egudileyo kunye nokuqaqanjelwa kwemabhile kuyenza ibe yinto entle ukuba uyisebenzise kwikhawuntara yasekhitshini. Ngethuba nje unakekela ngokukhethekileyo izinto ezinobuncwane, umphezulu ococekileyo wemabhile kufuneka uhlale ixesha elide.
Kukho izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ekufakweni Imiphezulu yeetafile zekhitshi lemabhile ekhayeni lakho. Masiqale ngezibonelelo. Kubaqalayo marble ujongeka umhle ekhitshini. Inika ubuhle beklasikhi ngokuqinisekileyo uyokonwabela. Ukongeza imarble ipholile ngokwendalo kwaye ayisiyiyo enkulu yokuqhuba ubushushu. Ke ukuba wenza ukubhaka okuninzi kukudibanisa okukhulu. I-Marble iyakwazi ukumelana nobushushu. Okokugqibela iyafumaneka ukuthengwa.
Ungasinika njani isithembiso
Ngoku kwicala elingalunganga leemabhile lilitye elithambileyo elithambekele ekukrangeni. Ukutywinwa kunokunceda ukukhusela umphezulu wamatye akho, ukuxhoma okuxhonyiweyo kusenokuba yingxaki. Kwaye oko kusizisa kulondolozo ekufuneka ukutywina okukhankanywe apha ngasentla kwenziwe kube kanye ngonyaka ukuxhomekeka ekubeni uxakeke kangakanani ekhitshini.
I-Quartz yenye yezona ndawo zinzima emhlabeni kwaye ngokwendalo ayina porous kwaye ayikrwemeki. Kuhle kakhulu, kunye nemibala eyahlukeneyo efana ne-gem-like coloring in a shades of Quartz has anti-microbial properties inhibit the growth of bacteria, mold and mildew.
Ezinye zezibonelelo ze imiphezulu yeetafile zekhitshi zekhitshi phezu lenyengane zezi zilandelayo. Ukuqala nge-quartz inembonakalo efanayo nelawulwayo. Iizilebhu ziveliswa kwaye zenziwe ngobuninzi ngokulinganayo ngelitye. Zomelele kakhulu ngokwendalo, kwaye xa zidityaniswe ne-resin binder inokuba yomelele kunezo zombini i-granite kunye nemabhile. Eli litye likwangumbindi ngokungafaniyo negranite okanye imarble eyenza ibala elinganyangekiyo kwaye kulula ukuyisebenzisa nokugcina.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngelixa imiphezulu yeetafile ze-quartz zinazo zonke izibonelelo esizijongileyo apha, kukho ezinye iziphene nayo. Ngelixa i-quartz yomelele ngakumbi, ineengxaki ezifanayo kwiitafile zegranite.
Iikona zekhawuntari yakho zinokulula kwaye ukuba ziyakwenza oko, zihlala zifuna ukulungiswa kobuchwephesha. Ungawunciphisa lo mngcipheko ngokufaka i-countertop enemiphetho ejikelezileyo kunaleyo ineekona ezingama-90.
Izinto zokubala ezinamanzi zinzima, ziyafikeleleka kwaye kulula ukuzinyamekela - zisule nje ngesepha namanzi. I-Laminate iza neendlela ezahlukeneyo zoyilo, imibala yeepateni ezenza kube lula ukufumana ikhawuntara eya kuthi incede uyilo lwakho lwekhitshi.
Izizathu nje ezimbalwa zokuba abanini khaya bakhethe i-laminate kungenxa yenxalenye enkulu kwixabiso eliphantsi, kuhlala ixesha elingakanani, kunye nokugcinwa okuphantsi kangakanani, kwaye kulula ukuyicoca. I-Laminate isasetyenziswa kumakhaya angama-80% aseYurophu kunye nesizathu esihle.
Oko kuthethiweyo, i-laminate-njengayo nayiphi na enye into- ayisiyonto egqibeleleyo ngokupheleleyo. Ngenye, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba uhlala usebenzisa ibhodi yokusika. Izinto ezibukhali njengeemela zingenza ngokulula umonakalo osisigxina kwi-countertop.
Uyakufuna kwakhona ukuqinisekisa ukuba ubeka izithintelo phakathi kwazo naziphi na iimbiza ezishushu okanye iipani zokubhaka ozibeka kwikhawuntari yakho. Ngelixa ii-countertops ze-laminate zinokumelana nobushushu obuncinci, zenziwe ngeplastiki ezinokunyibilika xa zibonakaliswe kumaqondo obushushu aphezulu kakhulu. Ngelixa ikomityi yekofu yakho yasekuseni ingayi kuyonakalisa, ungabona umonakalo ukuba ubeka iitreyi ezintsha zekuki ngqo kuyo.
Isibheno esifudumeleyo, sendalo sezinto zokubala iinkuni sinika indawo epholileyo, enekhaya ekhitshini. Iinkuni nazo ziyabumelana ubushushu kakhulu ukuze ungakhathazeki ngokubeka iimbiza ezishushu okanye iipani kwikhawuntara yeenkuni. Inye imiqolomba yokuqwalaselwa ngumthi ifuna ulondolozo oluninzi kwindawo yekhitshi. Ukutywinwa kunyanzelekile ngemveliso efana ne-Aqua spar kwaye kuya kufuneka yenziwe rhoqo ukugcina izinto zokubala iinkuni zikhangeleka zinomtsalane kwiminyaka ezayo.
Iyafaka imiphezulu yeetafile ikhitshi iinkuni ingabiza kakhulu kunezinye iintlobo ezininzi zezinto zokwakha. Ukongeza iinkuni zinezixhobo zendalo, ezichasene ne-bacteria xa zitywinwe ngokufanelekileyo. Nangona ukubuyela umva kweenkuni kuya kufuneka kutywinwe amatyeli aliqela ngonyaka kuxhomekeke ekugqityweni. Inkuni nayo kufuneka igcinwe yomile, eya kuthi ikugcine kwiinzwane zakho emva kokuchitheka okanye ukubukela iindawo zokuntywila.
Izixhobo zokubala ezingenasici ziyintandokazi yabapheki nabapheki. Isinyithi esingenasici sithintela ukwakheka kweebhaktiriya okwenza ezi ndawo zokubala zibe zezona zicocekileyo ezikhoyo. Izinto ezinobushushu obunokumelana nobushushu azonakalisi kwaye kulula ukuzicoca nokucoca. Into ekufuneka ithathelwe ingqalelo yinto engenamatshini eqala lula kwaye iyabiza kakhulu. Nangona kunjalo, ukufaka ibrashi imiphezulu yeetafile steel stainless inokukunceda ukunciphisa nakuphi na ukukrala.
Izinto zokubala eziphathekayo ziza kusasazeka kwindawo ethe tyaba, egudileyo yokusebenza. Imiphezulu yeetafile yekhonkrithi lukhetho olunamandla olwaneleyo njengoko lunokunceda ukulawula amaqondo obushushu ekhitshini- ikhonkrithi ibamba ubushushu kwaye ibukhuphe xa izinto zipholile. Ikhonkrithi ubukhulu becala ifana nelitye lendalo kodwa imibala eyahlukeneyo inokufezekiswa ngokongeza ii-pigment kumxube wekhonkrithi.
Iinkonzo kunye neengozi zekhonkrithi-Ukongeza ekumelaneni nobushushu, ikhonkrithi nayo iyamelana. Amandla ayo endalo aboleka ukuba ibe lulondolozo olulungileyo kwindawo ekuthiwa yeyokuhlala ixesha elide.
Ukuthetha ngotyalo-mali, imiphezulu yeetafile yekhonkrithi inokuba yinto ephezulu. Uqikelelo kuluhlu lwamaxabiso ukusuka kwi- $ 75 ukuya kwi- $ 150 okanye nangaphezulu ukuba ukhetha uyilo olukhethekileyo. Bafuna ulondolozo ngaphezulu koko. Iitafile zakho zekhonkrithi ziya kudinga ukuthengiswa ngokutsha rhoqo emva konyaka ukuya kwemithathu. Njengegranite, ngaphandle kwetywina elungileyo, uya kuthi ulibone ibala lakho lokubala ngokulula- inkxalabo ethile ekhitshini, apho ukuchitheka kunokubakho rhoqo.
sesiphi isandla esithembisa ukuba amakhonkco ayaqhubeka
Ikhawuntari yeglasi lulongezo oluhle kunye nolungelelwanisiweyo nakweyiphi na ikhitshi. Iglasi inokunqunyulwa phantse kuyo nayiphi na imilo kunye nokuthungwa kwaye iza nakwimibala eyahlukeneyo. Iglasi kulula ukuyigcina icocekile kwaye umphezulu wayo ongatshiyo unamachaphaza amileyo kwaye ucocekile.
iimpahla zikamakoti ukulungiselela ukungena
Iinkonzo kunye ne-Cons for Glass Countertops - iglasi inika neenzuzo ezifana nokuxhathisa ukushisa. Ikwahlala ixesha elide ngokumangalisayo. Ayibonisi ngokwendalo nayiphi na into yokunxiba yendalo ngaphezulu kweminyaka kwaye ayigobi okanye inciphise. Izixhobo zokubala zeglasi nazo zinobuhlobo kuba zihlala zenziwe ngezinto eziphinda zenziwe kwakhona.
Ayiphelelanga apho, nangona kunjalo. Ngelixa lihlala ixesha elide, ngakumbi izinto ezibukhali okanye ezinzima eziwele kwiikhawuntari zingazonakalisa kwaye ukuba loo monakalo unokulungiswa, kufuneka wenziwe ngesandla sobuchwephesha. Iindleko zokufaka imiphezulu yeetafile ekhitshini yeglasi nazo ziphezulu ngokubanzi.
Imiphezulu yeetafile erisayikilishekileyo yenziwe ngomxube wezinto ezizinzileyo ezifana neglasi, iinkuni, iphepha, iplastiki kunye nesamente. Ukhetho olunobuhlobo, ikhawuntara ehlaziyiweyo ikwakhona yomelele kwaye kulula ukuyicoca. Ukuza kuluhlu olubanzi lwemibala kunye noburhabaxa, ikhawuntara ehlaziyiweyo inokulingana ngokulula phantse nakuphi na uyilo lwekhitshi.
Izinto ezingafunekiyo zokuphinda zisetyenziswe ziyahlukahluka kuxhomekeka ekubeni yeyiphi na into oyithengayo eyenziwe ngokukodwa. Ingxaki enkulu uninzi olungena kuyo kunye neetafile zokuphinda zisetyenziswe zezixhobo kukuba aziphathi kakuhle ubushushu obuphezulu. Oku kuthetha ukuba ipani eshushu inokudala umonakalo.
Uninzi lwezinto eziluncedo kunye nezingeloncedo zokuphinda zisetyenziswe izinto zihamba ngokufana nezinto eziphinda zisetyenziswe. Umzekelo, iglasi ehlaziyiweyo inokubiza imali eninzi ukuyilungisa kwaye inokukhuseleka.
Ukufumana i-countertop yekhitshi efanelekileyo kuthatha ingqalelo enkulu. Inketho efanelekileyo iya kuxhomekeka kwizinto ezinje ngohlahlo-lwabiwo mali kunye nokukhethwa koyilo. Kukho, nangona kunjalo, iingcebiso ezivela kuyilo kunye noluhlu ekuthandeni.
Xa kuziwa ekuthandeni kakhulu, i-quartz ithatha ikeyiki njengezona zinto zisetyenziswa ngokufuthi ngokwe-National Kitchen kunye neBath Association. Oku kutshanje kudlule enye inketho ethandwayo: igranite.
Ezi countertops, njengoko sizigubungele, ziyafikeleleka kwaye ziyasebenza. Ezona zikhetho zincinci zithandwayo zezinye zeendlela ezibiza kakhulu njengeglasi kunye nekhonkrithi. Nangona kunjalo, ezi zixhobo zilungile kwi-countertop ekhangayo.
Xa ukhetha i-countertop yekhitshi lakho, ufuna ukuqinisekisa ukuba iyakwazi ukuphatha into oyiphonsa kuyo. Mhlawumbi ufuna kwakhona ukuqinisekisa ukuba awutyali imali kwi-countertop oza kufuneka utyalomali kuyo kamva ukuze uqeshe ingcali yokulungisa.
Ngokubanzi, i-quartz ithathwa njengeyona yomeleleyo xa kuziwa ekusingatheni umngcipheko weetshipsi kunye neentanda. Okwangoku, ayisiyiyo eyona nto inokumelana nobushushu kwaye ukuba ikhitshi lakho lineefestile ezininzi, usenokubona ukuvela kombala kwilanga.
Vala emva kwe-quartz, kwakhona, yi-granite. Olu khetho alunakuchasa ubushushu kodwa kunokwenzeka ngakumbi ukuba lube ne-chip kwaye kufuneka lutywinwe rhoqo.
Olunye uqwalaselo lwetafile yekhitshi lakho yeyona ilula ukuyigcina. Awunakufuna ukutyala imali kwi-countertop ekufuneka uyityale ixesha elininzi ekugcineni i-odolo ephezulu. Zininzi izinto eziqwalaselwayo ngaphandle nje kokucoca nje- kuya kufuneka ucinge malunga nolondolozo njengokuthengisa kwakhona.
Inketho elula onayo i-countertops ye-laminate. Oku akufuneki ukuba kuthengiswe kwakhona kwaye akunabungozi. Oku kwenza ukuba kube lula ukusula emva kobusuku bokupheka.
Okokugqibela, siza kujonga ukuba yeyiphi na imiphezulu yeetafile eya kukuhlawula kancinci. Kwakhona, imiphezulu yeetafile laminate winile. Enye yeendlela ezilungileyo zokugcina xa ukhetha i-countertop ye-laminate efikelelekayo kukuya kwivenkile yokuphucula ikhaya okanye kwi-intanethi kwaye ukhangele i-slabs zangaphambili. Unokujonga kwakhona kwiivenkile zoyilo zasekhaya ezinje ngeKEA.
Njengebhonasi, ezi countertops zilula ukufaka, zikongela nakwiindleko zokufaka ngokunjalo. Ukuchaneka, kukho iindawo ekubanjiswa kuzo ngokubiza kakhulu xa ukhetha iipremiyamu okanye uyilo lwenkcazo ephezulu.
Izimvo zesipho seminyaka eli-13
iilokhwe zomtshato zikamyeni womyeni
Ivanka trump ingoma yokuqala yokudanisa